Rosia: Mihaino Ny Resaky ny Polisy Nandritra Ny Fihaonana Tao St. Petersbourg · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2017 4:22 GMT
Namoaka ny fandraisam-peo tamin'ny resadresaky ny polisy misahana ny rotaka naparitaka tamin'ny Diaben'ireo “Mpanohitra” tao Moskoa (RUS tamin'ny 14 Aprily sy tao St. Petersburg tamin'ny 15 Aprily i Marina Litvinovich – mpisera LJ abstract2001, lefitr'i Garry Kasparov sy mpanorina ny PravdaBeslana.ru. Milalao ny iray amin'ireo horonantsary nandritra ny tontolo andro ny radio Echo ao Moskoa, kopia natonta nanaovana ho “bip” ireo rehetra mety ho teniratsy.
Ity ny iray amin'ireo famintinana nataon'ny abstract2001 (RUS):
[…] Misy ampahany sasany tena mahaliana azo ampifandraisina amin'ny lahatsary tamin'ny Martsa. “Gadrao izy rehetra!”, “Olona 30 eo ho eo no mitsangana eo, inona no tokony hataonay amin'izy ireo, tokony hogadrainay ve izy ireo?”, “Olona 50 eo ho eo no mandroso ho any amin'ny Kianja Triumfalnaya ary miaraka amin'izy ireo i Kasparov!”, “,” Ataovy azo antoka fa tsy miala i Kasparov, alaivo izy, “” Omeo [kamiao ho an'ireo gadra] bebe kokoa izahay! “, […]”Ho ento izy rehetra ary ampidiro ao! “,” Omeo baiko izy ireo mba hanagadra an'i Kasyanov! Ho ento izy ireo ary ampidiro ao anaty fiara fitaterana! Mila lehilahy maro kokoa ve ianao? “,” Namely an'i Kasyanov ry zareo, mandehandeha irery eny amin'ny arabe izy! “,” Inona no tianao holazaina, navelan'izy ireo handeha i Kasyanov? Iza no tompon'andraikitra amin'i Kasyanov? ” sns …………………… […]
Misy ihany koa ity rohim-baovao (RUS) tao amin'ny forum an'ny RadioScanner.ru ity, izay nihainoan'ireo mpiserasera ny polisy nandritra ny famoriam-bahoaka tao Moskoa:
Ivanov, 14 April, 2007, 13:02:27 -
Fanamarihana iray: “Tsy misy olona ao amin'ny Arabe Rozhdestvenskiy! Na dia olo-tokana aza, fa OMON ihany. Iza no tokony hogadraintsika, loza ity ?!”
Ivanov, 14 Aprily, 2007, 13:03:21 -
Ary ho setrin'izany – “Gadrao izy rehetra – miaraka na tsy miaraka amin'ny [sainam-pirenena, afisy, sns.] – gadrao izy rehetra!”
Tsy maintsy hanagadra ny OMON izy ireo :)))
Ireto ambany ireto ny sary vitsivitsy sy ny tatitra avy amin'ireo bilaogera nanatrika ny diaben'ny mpanohitra tao Saint-Pétersbourg tamin'ny 15 Aprily.
(Fampitandremana: tahaka ireo roa teo aloha – ato sy ato – mankany amin'ny bilaogy ahitana votoaty manana “bande-passante” mavesatra ny rohy sasantsasany .)
- Pejy valo amby efapolo misy sary avy amin'ny Diaben'ny Mpanohitra tao Saint-Pétersbourg tamin'ny Alahady lasa teo – azo trohana ao amin'ny endrika PDF ato, avy amin'ny mpisera LJ studio204 (Dmitry Shubin, Rosiana mpakasary monina any St. Petersburg). Ato sy ato ny lahatsoratra roa samihafa miaraka amin'ireo sary ireo.
-Mpisera LJ gangleon (sary sy lahatsoratra):
..] Olona 200 teo ho eo no natosika tamin'ny ampinga mba hiditra ao amin'ny Garan'ny Lamasinina Vitebsk. Nampiasa hery tamin'ny vahoaka nivorivory tao ny OMON, na dia teo aza ny zava-misy fa tsy niezaka nanao na inona na inona tsy ara-dalàna izy ireo (eny, afa-tsy ny andrana hanapaka ny tady). Natosika nankany amin'ny Zagorodnyi Prospekt kosa ny vondrona hafa. Nanakana andianà mpanao gazety ihany koa ny OMON ary nanomboka nidaroka azy ireo (tsy fantatra ny fahamarinan’ izany, tsy nahita izany aho), nanimba ny fakantsarin-dry zareo sy ny fitaovana hafa. Ny polisy hafa vao tonga indray, nikiakiaka sy nidaroka tamin'ny ampingany, nifindra nankany amin'ny vondrona maro farany, izay tao anatiny aho. Noho ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana, maro tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny diabe no naratra. Tapaka mihitsy ny lohaliky ny mpisotro ronono iray, ohatra.
Tsy niantso ny mpandray anjara hanao diabe ireo mpikarakara ny famoriam-bahoaka. [Mpitarika antoko iray] nangataka tamin'ny rehetra mba hody any an-trano rehefa tapitra ny fihaonana, ary raha nisy nikasa handeha ho any Smolny, dia tsy maintsy nanao izany manokana. Na izany aza, tsy navela hiala malalaka ny kianja ny olona. […]
- Mpisera LJ miiir (lahatsoratra):
- Tonga eto izahay mba ho ren'ny…
Simba ny mikrô.
- … olompirenena tena izy ao an-tanàna, – manohy ny kabariny tsy misy fanamafisam-peo ny mpandray fitenenana.
Takon'ny feon'ny angidimby mijanona eo ambonin'ny kianja ny feo rehetra, miaraka amin'ny teny MILITIA misoratra eo am-baravarany. Misokatra ny varavaran'ilay helikoptera, ka mivaky hoe MILIA ilay teny.
- Mpisera LJ zirkov (sary);
- Mpisera LJ flilm (sary – ato sy ato);
- Mpisera LJ near_bird (sary – ato sy ato).